Itoobiya Oo Dhisanaysa Ciidamo Badda Ah Iyo Xukuumadda Soomaliya Oo Shaki Ka Muujisay – somalilandtoday.com
Itoobiya Oo Dhisanaysa Ciidamo Badda Ah Iyo Xukuumadda Soomaliya Oo Shaki Ka Muujisay
(SLT-Addis-ababa) Waxa saacadihii ugu danbeyse xoogeystay war uu baahiyay mid ka mid ah warbaahinta dalka africa ka soo soo xiganaayo taliye ku xigeenka dalka Itoobiya waxaana oo walaac xoogan ka dhex dhaliyay soomaalida.
Hadalka oo warbaahinta soo xiganeyso ayaa ahaa macquul gal ma ahan in Itoobiya oo boqol milyan ah in bad la,aan ahaato dalal kale heystaan dakado aad u farabadan waxaana ka dhashay tuhun xoogan wallow maalinimada beri dalka Itoobiya ku wajahanyahay madaxweynaha soomaaliya.
Taliye ku xigeenka ciidanka Itoobiya wuxuu maanta sheegay in aysan jirin sabab Itoobiya oo qaran 100 Milyan ah uu bad la’aan u ahaato. Wuxuu kaloo sheegay in ay waajib tahay inay saameyn ku yeeshaan Bada Cas.
Raysal-wasaare Abiy ayuu sheegay in ay ka go’an tahay inuu dhiso ciidan bad oo xoog leh oo ay Itoobiya yeelato. Hadalka Janaraalka ayaa ku soo beegmay xilli la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu booqonayo Itoobiya.
Horay ayuu Farmaajo heshiis afar dekadood Itoobiya ku maalgashanayso ula saxiixday Abiy Ahmed. Shacabka Soomaaliyeed xaq ayey u leeyihiin in waxa socda loo caddeeyo oo mugdiga laga saaro wax badan.
Baarlamaankana waa in uu ogaadaa in waajibka ugu wayn ka saaran yahay